Wasaaradaha Internetka - Howlaha Maaliyadda ee Filibiin
Waddankiisa weyn iyo dariiq istiraatiiji ah oo loo maro Aasiya
Iyadoo ay ka badan yihiin jasiiradaha 7,000 iyo dadka sii kordhaya ee 104 million, Philippines waa waddan weyn oo istaraatiijiyadeed oo u ah Asia. Filibiin badan ayaa ka shaqeeya Shiinaha, wadamada kale ee Aasiya, iyo xitaa wadamada bariga dhexe, halkaas oo ay leeyihiin shaqooyin saameyn leh.
Doorka Muhiimka ah iyo Waqtiga loogu talagalay Qalabka Dayaxa
Kaniisadda Rabbiga waxay ku jirtay Filibiin sannado badan sababtoo ah dedaaladii hore ee hadda iyo hadda. Maanta waxaa jira qiyaasaha 800. Filibiiniyiinta Masiixiyiinta ah waxay diyaar u yihiin in ay sii wataan waddankooda si ay u sii wacyigeliyaan mudaharaadkooda kiniisadda, laakiin waxay u baahan yihiin kheyraad si ay uga gudbaan caqabadaha qaarkood.
Kaniisado badan oo ku yaala Filibiin waxay leeyihiin wakhti-wakhti-wakhti wacdiye ah ama midkoodba. Ciyaarta qoraxdu waxay ku siin kartaa dhammaan kooxaha kaniisadaha iyo fasalo leh waxbarid qoto dheer. Sidoo kale, meelo badan oo ka mid ah Filibiin waa kuwo fog oo adag in la gaaro. Ciyaaryahanka qorraxda ayaa loo sameeyay waqtigaan iyo booskaas sidan.
2014 Sunset wuxuu bilaabay dadaal badan oo badan oo qaaradda ka mid ah iyadoo la adeegsanayo ciyaartoyda loo isticmaalo qoraxda loo isticmaalo qoraxda si loo gaadho adduunka iyadoo la adeegsanaayo Injiilka. Dhacdooyinka Kulaylku waxay sii wadaan inay ku faafiyaan Ereyga aduunka intiisa kale. Maalinta Ciyaartu waxay ka kooban tahay saacadaha 400 ee Kitaabka Quduuska ah iyo Kitaabka Quduuska ah.
Qorshaha loogu talagalay Solar Mission Philippines waa in ay qarankan ku daboolaan Ereyga Ilaah adoo qaybinaya 2,000 ciyaartoyda qoraxda Ingiriisiga ku shaqeeya ee Filibiin dhammaadka 2018. Waxaa la siin doonaa dhammaan jaaliyadaha waddanka, dadaalada wasaaradaha kala duwan, iyo hoggaamiyayaasha kaniisadaha iyo wacdiyeyaasha kuwaas oo abuuri doona oo xoojin doona kaniisadaha iyo kobcinta walaalaha.
Dadaalada waddanka oo dhan si loo hubiyo maalgelinta loo baahan yahay waxay bilaabantay Janaayo 24th waxayna socon doontaa Diisembar 31, 2018. Kumanaan ka mid ah kulannada iyo shakhsiyaadka ayaa la weydiin doonaa inay taageeraan dadaalkan.
Iyada oo loo marayo deeq bixiyeyaasha qarsoodiga ah, hadiyadaha Sunset International Bible Institute ayaa loo dallaci doonaa dollar dollar. Hadiyadaha loo diro Howlaha Maalintaan waxay uqalmayaan cayaartaan.
Soo wac Sunset at 800-658-9553 si aad u hesho macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Dayax-qoraxda loogu talagalay Filibiin ama booqo boggooda http://www.sibi.cc/solar.